राजपाले छाता, नयाँ शक्तिले आँखा, कुन दलले के चुनाव चिन्ह पाए त ? - Everest Dainik - News from Nepal
राजपाले छाता, नयाँ शक्तिले आँखा, कुन दलले के चुनाव चिन्ह पाए त ?
काठमाडौं, भदौ २३ । निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिनका लागि दल दर्ता गराएका पार्टीहरुलाई बिहीबार निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेको छ ।
आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले निवेदन दिने दलहरुको चिह्न निक्र्यौल गरेको हो । मंसिर १० र २१ गते हुने उक्त चुनावका लागि ९५ वटा दलहरुले दल दर्ताको निवेदन आयोगमा बुझाएका थिए ।
हाल संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरुले यसअघि प्रयोग गर्दै आएका चुनाव चिह्न नै पाएका छन् । नयाँ दलहरुले पनि आफूले माग गरेअनुसारकै चुनाव चिह्न पाएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस यी हुन् ७५ जिल्लाकै निर्वाचन क्षेत्रको नक्सा
स्थानीय चुनावका बेला आफूले भने अनुसार चिह्न नपाएका राजपा, नयां शक्ति लगायतका दलहरु अब उनीहरुले चाहेकै चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्न पाउने भएका छन् । आयोगले माग अनुसार नै राजपालाई छाता र नया शक्तिलाई आंखा चुनाव चिह्न दिएको छ ।
स्थानीय तहको चुनावमा आफूले भने अनुसारको चिह्न नपाएपछि राजपाले साईकल चुनाव चिह्न प्रयोग गरेको छ भने नया शक्तिले संघीय समाजवादी फोरमको चुनाव चिह्न प्रयोग गरेको थियो ।
नया शक्तिले तेस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनावमा फोरमले आफ्नो चिह्न प्रयोग गर्न नदिएपछि स्वतन्त्र चिह्न लिएर प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । त्यस्तै विवेकशिल साझा पार्टीले तराजु चिह्न पाएको छ ।
केही राजनीतिक दलको चुनाव चिह्न भने मिल्दोजुल्दो छ । राप्रपाबाट हालै छुट्एिको राप्रपा प्रजातान्त्रिकले ‘गोलाकारभित्र हलो’ चिह्न पाएको छ । तर राप्रपाबाट यसअघि नै छुट्एिको प्रकाशचन्द्र लोहनी नेतृत्वको एकिकृत राप्रपा राष्ट्रवादी पार्टीले पनि मिल्दोजुल्दो चिह्न ‘आयातकारभित्र हलो’ पाएको छ । झट्ट हेर्दा दुबै चिह्न उस्तै लाग्छन् ।
त्यस्तै राजपाले पाएको छाता चिह्नसंग मिल्दोजुल्दो चिह्न अर्को पार्टीले पनि पाएको छ । जनशक्ति पार्टीलाई गोलाकारभित्र छाता चिह्न प्रदान गरिएको छ ।